राजधानी जोड्ने वैकल्पिक सडक बन्दै धार्के–कलङ्की
काठमाडौँ, फागुन २९ गते । मुलुकको अन्य भू–भागलाई राजधानीसँग जोड्ने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको धार्के–कलङ्की सडक खण्डको विकल्प अगाडि सारिएको छ । सरकारले धार्के–सीतापाइला सडकखण्डलाई यस सडकको विकल्पका रूपमा अघि सारेको हो । धार्के–कलङ्की सडकखण्डमा राजधानी भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधनको चापले वर्षांैदेखि अत्यधिक ट्राफिकजामको सास्ती हुने गरेको छ । यो सडकखण्डको निर्माणसँगै राजधानी भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधनका लागि नागढुङ्गाको जाम छल्ने एउटा उपयुक्त विकल्प तयार हुनेछ ।
नागढुङ्गा क्षेत्रको सवारी जाम अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको छ ।
काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवकुमार तामाङले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धार्के–कलङ्की सडकखण्डको विकल्पको रूपमा अगाडि सारिएको धार्के–सीतापाइला सडकखण्डको सम्पूर्ण निर्माण कार्य अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । यसअघि नै यस सडकखण्डको ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ ।
यो सडकखण्डको शून्य किलोमिटर सीतापाइला (चक्रपथ) देखि रामकोट–भीमढुङ्गा–महेशफाँट हुँदै धार्के पुग्नेछ । सीतापाइलादेखि धार्केसम्म कूल २४ किलोमिटर रहेको यस सडकखण्डको चौँडाइ १२ मिटर हुने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यो सडकखण्ड दुई लेनको हुनेछ ।
यो सडकखण्डको सम्पूर्ण निर्माण कार्य दुई चरणमा पूरा हुने बताउँदै डिभिजन प्रमुख तामाङले पहिलो चरणमा दुवैतिर सडक विस्तार गर्ने, चौडा गर्ने तथा ढुङ्गाको पर्खाल लगाउने, कल्भर्टसहित आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने जानकारी दिनुभयो । यो काम अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सडक खन्ने, चौडा गर्ने तथा पर्खाल लगाउने काम सम्पन्न भइसकेपछि कालोपत्रे गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने र अबको दुई वर्षभित्र यस सडकखण्ड निर्माणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले यो सडकखण्डको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको बताउँदै अबको तीन वर्षभित्र नै सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । यो सडकखण्ड निर्माणका लागि काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालय र भरतपुर सडक डिभिजन कार्यालयबाट काम भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सीतापाइला (चक्रपथ) देखि ठूलोखोला भन्ने ठाउँसम्म कुल दश किलोमिटर काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयको मातहतमा र ठूलो खोलादेखि धार्केसम्मको १४
किलोमिटरको निर्माण कार्य भरतपुर सडक डिभिजन कार्यालयको मातहतमा भइरहेको जानकारी प्रवक्ता गौतमले दिनुभयो ।
काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयका लागि रु. १५ करोड र भरतपुर सडक डिभिजन कार्यालयका लागि रु. २५ करोड गरी चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकखण्डका लागि रु. ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
धार्केदेखि कलङ्कीसम्मको दुरी २४ किलोमिटर छ भने त्यसैगरी धार्केदेखि सीतापाइलासम्मको दुरी पनि २४ किलोमिटर नै छ ।
पन्ध्र करोड रुपियाँको लागतमा यो सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कुवेत सरकारले तयार पारेको हो । सडक निर्माणको सम्पूर्ण लागत खर्च दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना (सन् २००२–२०२२) अन्तर्गत मुलुकको पूर्वबाट पश्चिम सिमाना छिचोल्ने गरी मध्य पहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण गरिरहेको छ । २० वर्षे यो दीर्घकालीन सडक गुरुयोजनाअनुसार पहाडमा चार घण्टामा र तराईमा दुई घण्टा पैदल दुरीमा पक्की सडक सुविधा पुग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।